Vaovao - Inona avy ireo sokajy valo amin'ny lasitra tsindrona?
(1) bobongolo tsindrona tsipika tokana
Rehefa nosokafana ny bobongolo dia misaraka ny bobongolo azo ovaina sy ny bobongolo raikitra, ka ny ampahany plastika dia esorina, izay antsoina hoe bobongolo tokana fisarahana ary antsoina koa hoe bobongolo misy takelaka roa. Io no endrika bobongolo tsindrona tsotra sy tsotra indrindra. Izy io dia azo noforonina ho toy ny lasitra fanindronana lavaka tokana na bobongolo tsindrona maro-lavaka arak'izay takiana. Io no lasitra fanindronana be mpampiasa indrindra.
(2) bobongolo fanindronana avo roa heny
Ny bobongolo fanindronana avo roa heny dia misy fisarahana roa. Raha ampitahaina amin'ny lasitra fanindronana tokana fizarana tokana, ny bobongolo tsindrona ambony fisarahana dia manampy takelaka mpanelanelana azo ovaina (antsoina koa hoe takelaka vavahady mihetsika) ao amin'ny faritra bobongolo raikitra. Izy io dia miaraka amina vavahady, mpihazakazaka ary faritra hafa ary singa ilaina amin'ny lasitra raikitra), noho izany dia antsoina koa hoe karazana lovia telo (lovia mihetsika, takelaka mpanelanelana, takelaka raikitra) bobongolo tsindrona, izay matetika ampiasaina amin'ny vavahady tokana manome sakafo. Lasitra fanodinana lavaka na lava-lava. Rehefa nosokafana ny bobongolo, ny takelaka mpanelanelana dia misaraka amin'ny môdely raikitra amin'ny halaviran-dàlana eo amin'ny tsatokazo ny lasitra raikitra mba hanesorana ny condensate an'ny rafitra mandraraka eo anelanelan'ny modely roa. Ny bobongolo fanindronana avo roa heny dia manana rafitra sarotra, vidin'ny famokarana avo ary fanodinana faritra sarotra. Amin'ny ankapobeny dia tsy ampiasaina amin'ny famolavolana vokatra plastika lehibe na lehibe io.
(3) Famolavolana tsindrona miaraka amin'ny tsipika fizarazarana sy ny mekanika mitarika
Rehefa ny lavaka plastika dia misy lavaka na sisin-dàlana dia ilaina ny mampiasa ny fotony na ny slider izay afaka mihetsika sisin-tany. Aorian'ny famolahana tsindrona, ny bobongolo azo ovaina dia afindra lavitra aloha, ary avy eo ny faritra mivalona amin'ny paingotra miforitra miorina amin'ny môdely raikitra dia manery ilay mpikorisa handroso ivelany, ary miaraka amin'izay koa, ny mpanery ny maodely maloto dia manosika ny takelaka mpanosika hamolavola ny ampahany plastika. Esory ny fotony.
(4) Famolavolana tsindrona amin'ny ampahany mihetsika mihetsika
Noho ny firafitra manokana amin'ny faritra plastika dia takiana ny bobongolo tsindrona miaraka amin'ny faritra mamolavola, toy ny bobongolo convex azo ovaina, ny bobongolo concave azo ovaina, ny sisin-javatra mihetsika, ny cores na ny peratra misy kofehy mihetsika, sns. Miara-mivoaka ny lasitra ary misaraka avy amin'ny ampahany plastika.
(5) Volavolan-tsolika manala ny tsindrona mandeha ho azy
Ho an'ny faritra plastika misy kofehy, raha ilaina ny fanesorana azy ho azy, dia azo apetraka eo amin'ny lasitra ny fotony na ny peratra azo soloina, amin'ny alàlan'ny hetsika fanokafana ny bobongolo na ny rafitra mihodina amin'ny milina fanodinana tsindrona, na fitaovana fampitana manokana handroahana ireo kofehy The ny peratra fototra na kofehy dia mihodina hamoaka ny ampahany plastika.
(6) bobongolo tsindrona tsy misy mihazakazaka
Ny bobongolo tsindrona tsy misy mihazakazaka dia manondro ny fomba fanamafisana adiabatic an'ny mpihazakazaka hitazonana ny plastika eo anelanelan'ny tendrony sy ny lavaky ny milina famolahana tsindrona ao anaty fanjakana an-idina, mba tsy hisy condensate ao anaty rafitra mandraraka rehefa nalaina ny ampahany plastika. mivoaka rehefa nosokafana ny bobongolo. Ny voalohany dia antsoina hoe bobongolo tsindrona adiabatic runner, ary ny faharoa kosa antsoina hoe mould injection injection.
(7) bobongolo tsindrona zoro havanana
Ny bobongolo tsindrona zoro havanana dia tsy mety afa-tsy amin'ny milina fanefena zoro. Tsy toy ny bobongolo tsindrona hafa, ny làlan'ny famahanana an'ity karazana bobongolo ity mandritra ny famolavolana dia mifanandrify amin'ny fanokafana sy ny lalana famaranana. Ny làlany mikoriana indrindra dia miorina amin'ny lafiny roa amin'ny faritra fisarahana bobongolo mihetsika sy raikitra, ary ny faritra misy azy dia mazàna tsy tapaka. Tsy mitovy amin'ny lasitra fanindronana hafa io. Ny faran'ny làlana mivezivezy lehibe dia ny fisorohana ny milina fanorohana tsindrona. Ny nozera sy ny faran'ny fidirana amin'ny fantsona lehibe dia tonta sy simba, ary misy fantsona fantsona azo soloina azo omena.
(8) bobongolo tsindrona ny famoahana bobongolo amin'ny lasitra raikitra (Cavity)
Amin'ny ankabeazan'ny lasitra fanindronana, ny fitaovana fanesorana dia apetraka eo anilan'ny lasitra azo ovaina, izay manampy amin'ny asan'ny fitaovana fanesorana amin'ny rafitra bobongolo fanokafana sy fanidiana ny milina fanodinana tsindrona. Amin'ny famokarana tena izy, satria ny faritra plastika sasany dia voafetran'ny endriny, tsara kokoa ny mamela ny ampahany plastika eo anilan'ny lasitra raikitra. Izany dia mahatonga ny ampahany plastika hivoaka amin'ny lasitra, noho izany dia tsy maintsy apetraka amin'ny sisin'ny lasitra voafaritra izy io. rafitra.
Manaraka: Inona no atao hoe lasitra?
Teo aloha: Fametahana tsindrona plastika